Sajhasabal.com |बैतडीका तीन ग्रामीण सडक कालोपत्र हुँदै, कुन कुन-परे ?
बैतडीका तीन ग्रामीण सडक कालोपत्र हुँदै, कुन कुन-परे ?
पुस २८, बैतडी । जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षमा तीनवटा सडकमा कालोपत्र गर्न थालिएको छ ।
पाटन–पञ्चेश्वर सडकअन्तर्गत स्याडीगाडदेखि मेलौलीसम्मको सडक कालेपत्र हुने भएको छ ।
यस्तै उग्रतारा मेलौली सडकको आठ किमी सडक कालोपत्रका लागि ठेक्का भइसकेको छ भने सिल्लेगडा कटौजपानी सडकको आठ किमीसम्म कालोपत्र गर्नका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम अघि बढेको छ ।
सवइन्जिनियर भट्टराईले भन्नुभयो, “ती सडकमा गत आवमै बजेट विनिनियोजन भएकाले कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको हो ।”